Cabi Axmed Axmed oo looga digey inuu faraha la galo siyaasada Somaliya - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Cabi Axmed Axmed oo looga digey inuu faraha la galo siyaasada Somaliya
Raiisal wasaaraha Itoobiya Cabi Axmed ayaa looga digey inuu faraha la galo siyaasada Somaliya kadib matkii la ogaadey inuu isagu ka dambeeyay wefti yimi Hargeysa iyo midkii usbuucii hore tagey Xamar.
Eriteriya oo Itoobiya iyo Imaaraadku wato ayaa rabta inay qaban qaabiso shir ay ugu yeereen isku keenka dawlada dhexe iyo maamulka Muuse Biixi.
“Deganaansho siyaasadeed awgeed laguma tilmami karo maamulka ka jira Hargrysa inuu yahay mid matala beesha ISAAQ ee siyaasiyiintooda qaarkood rabaan inay go’aan taas oo soo jirtey mudada burburka ah laakiin ay jirin cid ka hoos qaada.
Shirkii Ingiriisku ku sirey fadhiid Sheekh Shariif ayaa saxaafada loo isticmaalay sheekada Somaliya iyo Somaliland oo ah fariin qaldan oo ka dhigaysa maamulkaas mid gooniya kadib markii ay ku fashilmeen inay aqoonsi uga raadiyaan Afrika ama iyagu ictiraafaan ayuu yiri Maxamed Qaasim.
Cabi Axmed ayaa laga soo xigtey inuu war ka sugayo Yurub si uu ugu dhiirado inuu qaban qaabiyo shir waqti lumisa oo noocaasa oo Somaliya xilligan u baahneyn. Wakiilada Yurub ayaa baryahan yimaada Hargeysa ayadoo aan tafaasiil laga bixin waxay u yimaadaan.
Sida ugu wanaagsan waa in Somalidu ka tashato arimaheeda, taas oo ah xalka kaliya. Kolba dal loo cararaa waxba faaiido ma soo kordhinayso ayuu yiri Warsame Cigaal oo Hargeysa jooga.
Cabi Axmed ma geli karo arimaha gudaha ee Somaliya waa haduu rabo inuu xiriir fiican la soo yeesho bulshada Somalida, waxa kaliya loo arkayaa inuu wado sii kala fogeynta Itoobiya ka waday dalka mudadii burburka.
Xalku wuxuu yaalaa in dadka reer Woqootiga ah ka tashadaan sidey u dhisan lahaayeen maamul ay dhan yihiin intayna Koofur ula tagin waa go’nayda.
WQ: Maxamed Yuusuf
ARAABINEWS masuul kama ah figradaha halkan lagu soo bandhigo.